प्रहरीले फेला पार्यो नेपालमै यस्तो धन्दा, तथ्य खुल्दा प्रहरी ने झस्कियो ! - Gokarna News from Nepal
प्रहरीले फेला पार्यो नेपालमै यस्तो धन्दा, तथ्य खुल्दा प्रहरी ने झस्कियो !
मङ्गलबार, भदौ २४, २०७६ by Gokarna News
काठमाडौ– कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सबै झस्किने एउटा धन्दा फेला पारेको छ । नेपालमापनि यति ठूलो धन्दा भइरहेको छ भन्ने तथ्य खुल्दा प्रहरी ने झस्किएको छ । नेपाल प्रहरीले नेपालमा नै हतियारको कारोबार हुने गरेको तथ्य पत्ता लगाएको हो ।